Ogaden News Agency (ONA) – Human Right Watch oo Warbixin Xasaasi Ah Kasoo Saartay Ogaadeniya.
Human Right Watch oo Warbixin Xasaasi Ah Kasoo Saartay Ogaadeniya.
Posted by Wariye Qaran	/ July 5, 2018
Maanta waxay haayada Xuquuqul Insaanka ee Human Rights Watch soo saartay warbixin xaasaasi ah oo looga hadlayo xad gudubyada ka dhanka ah bani aadamka ee lagula Kaco maxaabiista Xabsiga Jeel Ogaden.
Warbixintan ayaa lagu waraystay boqolaal qof oo ku xidhnaan jiray xabsigaas Jeel Ogaadeen. waxaana kamida dhibanayaashaas xubno u shaqayn jiray Maamulka soomaalida oo horay loogu xidhay xabsigaas.
Warbixintan waxay qeexday tacadiyada dhulka soomalida Ogadeniya ka dhaca oo ah kuwa aan si kala sooc lahayn dadka loogu ciqaabo haween, caruur, waayeel, umul iyo rag intaba.
Tacadiyadan ka dhanka ah xuquuqda aadamaha oo si maalin le ah uga dhaca Soomalida Ogadeniya waxaa masuul ka ah oo gaysta maamulka Cabdi ilay kuwaas oo danbiyada ay gaystaan aan loo ciqaabin.
Warbixintan waxay si qoto dheer uga waramaysaa shaqsiyaadka sida tooska ah u gaysta danbiyadaas midaas oo fariin iyo digniin culus u diraysa gaar ahaan Cabdi Maxamuud Cumar (Cabdi ilay) iyo kooxdiisa canaasiirta ah ee gaysanaya danbiyadan ka dhanka ah xuquuda aadamaha.
Magacowgan sida tooska ah loo sheegayo danbiilayaasha falalkan arxan darada ah gaystay waxay tilmaamaysa in beesha caalamku ay talaabo talaabo ula socdaan danbiilayaashaas oo mar aan fogayn la hor keeni doono cadaalada.
Xogtan cusub waxay soo baxday waqtigii ku haboonayd gaar ahaan waqti la filayo in isbadal wanaaagsan ka hir galo dalka Ethiopia. Isbadalkaas oo horseed u yahay raysal wasaaraha cusub ee Ethiopia Dr Abiye Axmad.
Walow rajo wanaagsan iyo saansaan cusub ka curatay dalka Itoobiya Hadana Ogadeniya waxaa wali ka taagan cabududhintii iyo tacadiyadii foosha xumaa ee lagula kacayay muwaadiniinta Somalida Ogadeniya.
Dhibaatada ka jirta soomaalida Ogadeniya waxay culays iyo masuuliyad gaar ah saaraysa raysal wasaarah cusub. Waxayna muujinaysa baahida looqabo sidii isbadal dag dag ah looga hirgalin lahaa dhulka soomalida Ogadeniya.